Ukuphawula ilizwe lokwenyani- iGeofumadas
Oku kubhengeziwe kwezi ntsuku kwiphepha leYunivesithi yaseRey Juan Carlos. Isoftware yasimahla yeefowuni ezikuvumela ukuba 'ubeke uphawu' kwihlabathi lokwenyani.
Ngokwale ndlela, abasebenzisi banokudibanisa okuqukethwe kwe-multimedia kwinto ekhomba ngefowuni, unamathisele itayiti 'eyiyo' kwinto yangempela kwaye umntu owelayo angawufunda. Kwaye konke okuvela kumakhalekhukhwini. Yiyiphi iprogram ye-free 'LibreGeoSocial' (LGS) evumela, inkqubo ephuhliswe ngabaphandi kwiYunivesithi yeRey Juan Carlos kwiifowuni ze-Android, inkqubo yokusebenza eyenziwe nguGoogle. I-LGS yi-multimedia umphathi we-georeferenced content. Oko kukuthi, ivumela umsebenzisi wenethiwekhi yentlalo ukuba agcine ulwazi (itekisi, iifoto, ividyo, i-audio ...) exhunywe kwindawo ethile. Kwaye ine-interface yangempela engabonakaliyo. Oko kukuthi, xa umsebenzisi ekhomba ngendawo ehamba phambili kwizinto ezibhalwe ngaphambili, umqondiso wokuthi omnye umntu 'uye washiya' kukho kubonakala kwisikrini.
"Oku kunamava amaninzi kunokuba yintanethi yentlalo yesininzi ngenxa yokuba izilwanyana zamandla omnxeba weefowuni ezitsha zivumela ukuba singakwazi kuphela apho i-mobile ehamba khona kodwa nalapho ikhokele khona",
Utsho uPedro de las Heras Quirós, ilungu leqela le-GSyC / Libresoft kunye nomphandi weprojekthi. Uyongezelela: "Iimodyuli ze-LibreGeoSocial ezithengiswayo kunye ne-georeferencing zivumela abasebenzisi bezonxibelelwano zentlalo abaye baphuma ukusebenzisana nehlabathi elona nto, kodwa kunye nehlabathi lenene." Oku kuvula uluhlu oluninzi lwezibonelelo: izikhokelo zokukhenketho, iinkqubo zokuthatha inxaxheba koluntu, amanxibelelwano oluntu kubantu abanokuxhomekeka kunye nokufunda.
Eminye imizekelo: Ukutyelela umtyeleli, ukhangele iifowuni yakhe kumfanekiso kunye nezimvo, imifanekiso, njl. Njl. ukuba omnye umhenketho wangaphambili 'unamathele' malunga nalo msebenzi wobugcisa. Ummi ubona ama-aves afanele awele kwaye avelise iziganeko ezidibene naloo phahla. Iinkonzo zokulondolozwa kwesithili zingafumana ngokuzenzekelayo le ngcaciso. Xa befudukela kwindawo ukuxazulula ingxaki banokuyifumana indawo leyo ngokubonga ngenxa ye-interface yangempela. Ukongezelela, de kubekiwe, abanye abasebenzisi abadlulayo banokufumana izaziso kwiifowuni zabo.
Ngaloo nto, umasipala angayisebenzisa ukuba uphando lwamacebo anomdla, njengempawu, amashishini, amaphulo enobungozi, ukuphulwa kwemigangatho, njl njl.
Kodwa i-LibreGeoSocial inikeza enye inzuzo: inesinjini yokukhangela injini. Oko kukuthi, iindawo ezithile network (multimedia, abantu, iziganeko ...) zilungiswa ngokusebenzisa inkqubo algorithms Kuphononongwa ukuba siqonde ubudlelwane non-ecacileyo phakathi kwabo, nto leyo evumela abasebenzisi ukufumana abanye abasebenzisi okanye isiqulatho kwi-network ukuba zinxulumene nangona zihlala kwiindawo ezahlukeneyo zentlalo yenethiwekhi. Ngoko ke, umzekelo, umsebenzisi Ndizakwenza yokucinga ukufumana omnye umsebenzisi batyelela iWeb iindawo zazo efanayo okanye izinto ezifanayo.
I-FreeGeoSocial inomncedisi kunye nesicelo somthengi weselula. Umncedisi usetyenziswe ulwimi lweprogram yePython. Isicelo somthengi senziwe ngolimi lweJava. Zonke iseva ikhowudi yemvelaphi kwaye umxhasi LibreGeoSocial ukhululwe njengoko software free, leyo yenye izicelo zokuqala esikubona ngokoqobo for Android ikhowudi yayo yemvelaphi ekhoyo, yaye omnye ambalwa ekhoyo kunye Sky Map and Wikitude. Kwakhona isicelo client iya kufumaneka kungekudala kwi-Android Market izicelo kwimarike, ukulungele ukuba ulayishwe ezantsi kwaye labo phones Android kuthengiswa abaqhubi ezinkulu mobile Spain kaThixo.
Post edlulileyo«Ngaphambilini Zingaphi iprojekthi ezifanelekile kule blogi?
Post Next I-3 inqwenela namhlanjeOkulandelayo »